Pazuva rino Isaac Asimov, biochemist uye munyori akazvarwa | Zvazvino Zvinyorwa
Isaac Asimov anoyeukwa pamusoro pezvose nekuda kwekupa kwake kukuru pasainzi nyika, nekuda kwekutsvagisa kwake uye nhaurwa, asi zvakare aive munyori wesainzi. mabvazuva munyori uye biochemist, hafu yeRussia, hafu yeAmerica (aive nehukama hwehukama), Akazvarwa pazuva rakaita nhasi, muna Ndira 2kana, asi kubva mugore ra1920, muRussia, kunyanya muPetrovichi, asi pazera ramakore matatu chete, akatamira nemhuri yake kuNew York, USA.
Akapedza kudzidza muBiochemistry kubva kuColumbia University uye akazopedza degree rekupedza kudzidza mu chemistry raakapedza muna 1941, kuyunivhesiti imwe chete, izvo zvaizomubatsira kuwana basa semuongorori wemakemikari muUS Navy, munzvimbo dzayo dzezvikepe. Makore gare gare, akawana doctorate muKemistry uye akazova mumwe wevadzidzisi vevashandi ve Boston University.
Achirega parutivi hupenyu hwake hwehunyanzvi uye achienderera mberi nekutaura nezve ake akasimba-ezvekunyora chikamu, aive zvakare musiki wemabasa esainzi ngano uye nhoroondo. Basa rake "Nheyo", inozivikanwawo se Trilogy o Trantor Kutenderera, ine huwandu hunopfuura mazana mashanu mavhoriyamu, tinogona kuwana ese akavanzika-fantasy anoshanda uye zvisiri zvinyorwa. Ndega Rober A. Heinlein naArthur C. Clarke Ivo vaigona kufukidza Asimov, nekuti vese vari vatatu vaionekwa senge vanyori vengano dzesainzi yenguva iyoyo.
Se data rekuda kuziva, isu tichati iro bhaisikopo ini, Robhoti raive rakavakirwa pabasa naAsimov uye kuti muna 1981 asteroid 5020 yaizotumidzwa zita rake.
Ndingafe ndine makore makumi manomwe nemaviri muguta rimwe chete rakamugamuchira, New York.
10 makotesheni naIsaka Asimov uye vhidhiyo
"Chekutanga, ngatibvisei Socrates, nekuti ini ndatoguta neichi chigadzirwa chekuti kuziva chinhu chiratidzo chehungwaru."
"Muhupenyu, kusiyana nechess, hupenyu hunoenderera kunyangwe mushure mekutarisa."
"Kune hondo imwe chete inogona kubvumidzwa nevanhu: hondo yekurwisa kutsakatika kwavo."
Hapana chinoshandura kusungwa kwangu. Iwe unogona kunge uine orgy muhofisi yangu uye ini ndisingatarise. Zvakanaka, pamwe kamwe chete.
"Ndine chokwadi chekuti kuzvidzidzisa ndiyo yega mhando yedzidzo iripo."
"Kwandiri, kunyora kuri kungofunga nezvigunwe zvangu."
"Kuzvipira mukusaziva uye kutaura nezvaMwari kwagara kuri nguva, uye nanhasi kuchiri kusati kwasvika."
Ndiri munhu akasimba uye asingatendi kuti kuna Mwari. Zvakanditorera nguva yakareba kuti nditaure. Ndave ndiri asingatendi kuti Mwari ariko kwemakore nemakore, asi neimwe nzira ndainzwa kuti kwaive kushaya njere kuti munhu ataure kuti haatendi kuti kuna Mwari, nekuti zvinotora kuve neruzivo rusina munhu. Neimwe nzira, zvaive nani kutaura kuti mumwe aive munhu kana agnostic. Ini ndakazofunga kuti ndiri chisikwa chese manzwiro uye chikonzero. Mumanzwiro, ini handitendi kuti kuna Mwari. Handina humbowo hunoratidza kuti Mwari haako, asi ndine fungidziro yakasimba yekuti Haapo zvekuti handitombodi kutambisa nguva yangu pazviri.
"Usamborega pfungwa yetsika ichikutadzisa kuita zvakanaka."
"Chinhu chinosuruvarisa chehupenyu izvozvi ndechekuti sainzi inounganidza ruzivo nekukurumidza kupfuura nzanga inounganidza huchenjeri."
Tevere, tinokusiya uine chidimbu chebvunzurudzo chakaitwa kumunyori, kwaakafanoona iyo kukanganisa internet muhupenyu hwevanhu:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Pazuva rino akaberekwa Isaka Asimov
Mabhuku akanakisa egore rino